दादाको साथीले बाथरुममा लग्नु भएको त्यो दिन – Ekathmandunepal
Homeपत्याउनै गाह्रोदादाको साथीले बाथरुममा लग्नु भएको त्यो दिन
४ पुष २०७४, मंगलवार १८:४६ ekathmandu Nepal पत्याउनै गाह्रो 0
हेल्लो, मेरो नाम निशा हो। म २२ वर्षकी भएँ। पहिले नै भन्दैछु, म भर्जिन होइन। तर जसलाई मसंग सेक्स गर्न मन छ, मसंग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गर्नु म कन्ट्याक्ट गर्छु।
यो कथा मेरो दादाको विदेशबाट आएको साथी र मेरो बिचको हो। आकाश र मेरो बिचको हो। आकास मेरो दादाको मिल्ने साथी हो। उ बाहिर युएसमा बसेर आएको हो। उनको परिवारमा कोही पनि छैनन्। दिदी हुनुहुन्थ्यो वहाँ पनि श्रीमानसंग अष्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। आकास पनि युएसमै सेटल छ। लामो छुट्टी लिएर आकास नेपाल आएको हो। आकासको गर्लफ्रेन्ड पनि छ। तर त्यस्तो फ्युचरलाई नै हुने गरि चाहीँ छैन भनेको थियो।
आकाससंग फेसबुकमा कुरा हुन्थ्यो। स्काइपमा भिडियो च्याट हुन्थ्यो। दादाको मिल्ने साथी पनि हो। दादा र म संगै बस्छौ। ड्याडी र मम्मी धरानमा हुनुहुन्छ। आकासले आफ्नो रिलेसन कस्तो हुँदैछ सबै सुनाउँथ्यो। म्याच्युअर्ड नै हो आकास तर म तिमी भन्थे। दादाले तपाई भन्न सिक भन्नुहुन्थ्यो। किन किन तपाइ भन्नै आउँदैन्थ्यो। म तिमी नै भन्थे। आकासलाई केही प्रोब्लम हुन्थेन।
युएसबाट नेपाल आउने बेला आकासले मलाई केके चाहिन्छ भन म ल्याइदिन्छु भनेर भन्यो। म ड्रेसको सौखिन थिए, एक्सेसरिज सबै। मेले केही भनिन। जे मनलाग्छ त्यहि ल्याइदिनु भने। आकासले हुन्छ म मेरो तर्फबाट तिमीलाई जे भएनि ल्याइदिन्छु भन्यो।
नेपाल आएको दिन उसलाई लिन म एयरपोर्ट पुगे। फ्ल्याइट डिले भएकाले १ घण्टा कुर्नु पर्यो। आकास आयो। आउने बित्तिकै अंगालो हाल्यो। हामीलाई यस्तो कुरामा मतलब हुन्थेन। हामी भन्दा नि मलाई चाहिँ। किनकी मलाई यस्तोको बानी थियो। मत मेरो ब्वाईफ्रेन्ड हुँदा नि अर्को अर्को केटहरुसंग नाइट बस्थे। मलाई यस्तो कुरामा केही मतलब लाग्थेन। This is my life. मलाई कसैले interfere गरेको मनपर्दैन। त्यसैले ब्याईफ्रेन्ड पनि चेन्ज भइरहन्थ्यो मेरो।
आकाससंग घर पुगे। आकास नेपाल घुम्न आको थियो। मेरो पनि भ्याकेसन चलिरहेको थियो। तिमीलाई घुमाउन लान्छु भनेर भनेको थियो। म त almost ready थिए। मलाई लङ टुर भनेपछि यस्तो मनपर्थ्यो फेरी। त्यो दिन घरमै बसेर कुरा गर्यौं। आकासले मलाई भनेर टन्नै गिफ्ट ल्याएको रहेछ। iphone7oh god! ड्रेसहरु, महंगा खालका।
दादा नी राती आउनु भयो। ३ हप्तासम्म चाहीँ यहिं काठमाडौँमै घुम्छु भनेर भनेको थियो आकासले।हामी घुम्न गयौं। आकासले कार भाडामा लिएको थियो। आकाससंग टाइम स्पेन्ट गर्न रमाईलो लागिरहेको थियो। मेरो एउटा bf अति possessive थियो। झन् आकासंग घुमेरको फोटोहरु फेसबुकमा राख्दा मलाई फोन गरेर किचकिच गरेर। मैले मतलब नै गरिन। आकासलाई गाली गराउन लगाइदिएँ।
दादालाई प्रोजेक्टको लागि घान्द्रु जानु पर्ने थियो। आकासले हामी पनि जाम भनेको थियो। मैले मेरो ब्वाइफ्रेन्डसंग त्यति बेला अर्कै प्लान छ भने। आकासले हुन्छ हामी पछि जाउँला भनेर भयो। आकाससंग घरमा म एक्लै थिए। दादा एक हप्ताको लागि जानु भएको थियो। एक हप्ता सम्म आकास र म एक्लै हुने भयौँ।
उसले मलाई डिनरको लागि महंगो रेस्टुरेन्टमा लगेको थियो। मलाई निकै स्पेशल फिल भयो। एक रात हामी रुममा नै ड्रिङ्क्स गर्दै बस्यौ। हामी दुवै जना अलि झ्याप भइसकेका थियौं। आकास र म गफ गर्दा गर्दै उनले अंगालो हाल्यो।
‘तिमी रेडी छौ भने तिमीलाई बिहे गरे युएस लान्छु। मलाई बुझ्ने तिमी मात्र छौ। तिम्रो दादासंग म कुरा गर्छु रेडी छौ भने म तिमी संगै लाइफ बिताउन चाहन्छु भनेर आंखाबाट आशु झार्यो।
आकासलाई पहिलो पटक मैले त्यस्तो इमोशनल भएको देखेको थिए। म नि इमोसनल भए। आकासको आशु मेरो lips ले पुछिदिए। I kissed him. किस गरेपछि हामी झन इमोसनल हुन थाल्यौं। hug, kiss बाट हामी तलमाथी पोजिसनमा पुग्यौं। आकासको माथी बसेर किस गरे। आकासले मेरो boobs चुस्यो। मेरो boobs ठूलो छ। सबै bfहरु मेरो bubu चुस्न मनपराउँछन्। आकासले bubu चुस्यो। तल मेरो पुति चाट्यो। चल्दै चल्दै हामी पोजिसनमा पुग्यौं। उसले मेरो पुति चुस्न थाल्यो। मैले उसको लाडो चुस्न थाले। पोजिसन चेन्ज गरेर उसले मेरो पुतिमा औँला छिरायो। केही बेरमा उसले मलाई चिक्न थाल्यो। Ohhh कस्तो दुख्यो। लाडो नि आकासको मोटो र लम्बाइ पनि उस्तै थियो… एकदम दुख्यो। आकाससंग म Physical भए।
मलाई पनि एकदमै योवनको मात चढेको थियो अनि (477)
यी पोजिसनहरुमा सम्भोग गर्दा लामो समय सम्म गर्न… (330)
के खाँदा कोलेस्टेरोल घट्छ २ मिनेट समय निकालेर अवश्य पढौं (239)
भर्जिन केटीलाई घरमा अर्धनग्न भेट्दा…. (189)
माइजु त कुकुरसँग मस्ती गर्दै हुनुहुन्थ्यो (186)
आबुई… कति ठूलो यो त मेरोमा छिर्दैन होला ?” (3,229)
घरबेटी दाइले जबर्जस्ती मेरो रातो पेन्टी भित्र हात छिराए (3,167)
बहिनी भनेर के गर्नु , खाली अगाडि आएर तिघ्रा देखौने ,… (2,533)
दिदी अब त अति भयो यो भाईको भाईलाई अब स्वर्गको बाटो… (2,335)